Arovy ny fanofana fialan-tsasatrao amin'ny hosoka amin'ny rohy azo antoka 3-D
Raha toa ny orinasa fitantanana fananana, hotely ary mpampiantrano rehetra mikatsaka ny hampitombo ny tombam-bolany amin'ny fivarotana amin'ny fantsona maro, tsy ny fantsona rehetra no manome fiarovana azo antoka. Ohatra iray amin'izany ny Booking.com (raha tsy mandoa vola amin'ny Booking.com ianao), ary ny famandrihana nalaina mivantana tamin'ny alàlan'ny mailaka, an-tariby, na tamin'ny tranokalanao manokana.
Ny fakana vola amin'ny carte de crédit lavitra dia ahafahanao misokatra amin'ny hosoka sy chargebacks. Mandritra izany fotoana izany dia tsy azo ampiharina ny manangona fandoavam-bola sy tahiry fiarovana hatrany amin'ny alàlan'ny famindrana banky, na hihaona amin'ny vahiny amin'ny fahatongavany mba hanangona vola na hanome alalana ny carte de debit amin'ny alàlan'ny milina puce sy pin. Na dia fomba azo antoka kokoa amin'ny fanangonana fandoavam-bola aza izy rehetra, dia afaka mandray loharanon-karena be dia be koa izy ireo, ary amin'ny tranga sasany dia hanakantsakana ny fivezivezena ary hampitombo ny fahafaham-po very tsy hita.
Ahoana no hanampian'ny rohy azo antoka 3-D an'i Zeevou?
Ny fomba azo antoka indrindra amin'ny fakana vola amin'ny karatra lavitra dia amin'ny alàlan'ny fampiasana rohy azo antoka 3-D. 3-D Secure dia takelaka fanamarinana fanampiny izay vita amin'ny alàlan'ny vavahady fandoavam-bola rehefa manamarina karatra, ary manampy amin'ny fisorohana ny fampiasana karatra tsy nahazoana alalana. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ho an'ny karatra mandray anjara, ny tompon'ny karatra dia asaina mampiditra teny miafina izay nifanarahan'izy ireo tamin'ny mpamoaka ny karany, na mety angatahina izy ireo hamita fanamarinana fanampiny amin'ny alàlan'ny kaody nalefan'ny hafatra an-tsoratra na fitaovana hafa nomen'ny banky azy ireo.
Ny fiantohana fa ny fandoavam-bola ataon'ny mpitsidika dia mandalo ny seky 3-D Secure dia mampihena be ny mety hisian'ny chargeback, satria ilay olona mandoa dia mila milaza fa izy no tompon'andraikitra amin'ny karatra. Noho izany, raha tokony handidy ny antsipirian'ny karatra izay ampitain'ny Booking.com mankany amin'i Zeevou, mpitarika ny indostria misy anay dingana famandrihana mandeha ho azy mandrisika ny vahiny vola amin'ny alàlan'ny endrika azo antoka 3-D. Mandritra izany fotoana izany dia afaka misintona an ny vahiny faktiora noho ny fijanonany amin'ny fotoana fandoavam-bola. Zeevou dia mamela anao ihany koa hamorona Rohy Ampahany amin'ny fandoavam-bola mba hanangonana vola ho an'ny ampahany amin'ny fijanonana na hanangonana fandoavam-bola avy amin'ny antoko maro ho an'ny famandrihana iray ihany.
Inona koa, mampiavaka an'i Zeevou petra-bola fiarovana ny endri-javatra fikirakirana dia mampiasa karatra izay nandalo ihany koa ny fanamarinana azo antoka 3-D mba hanomezana alalana mialoha na handoavana ny petra-bola fiarovana an'ny vahiny. Amin'ny alàlan'ny fampiasana rohy azo antoka 3-D ho an'ny fandoavam-bola sy ny fametrahana vola azo antoka dia azonao atao ny mandoa vola ny vahiny alohan'ny hijanonany amin'ny fomba azo antoka ary hampitombo ny antoka azonao antoka fa tsy hangalarina ny vola azonao.